Ngizobuya ukukushayela in English. Ngizobuya ukukushayela Meaning and Zulu to English Translation
Home>Words that start with I>I'll call you>Ngizobuya ukukushayela (Zulu to English translation)
What does Ngizobuya ukukushayela mean in English? If you want to learn Ngizobuya ukukushayela in English, you will find the translation here, along with other translations from Zulu to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Ngizobuya ukukushayela meaning in English:
Kwangathi ngikhuluma Nkosikazi Smith sicela?
Mina Kumelwe uxolise wena
Ngidinga ukufona zisuka
Ngidinga ukuya ekhaya
Ngingaba nayo imenyu?
Ngingumfana omuhle, futhi?
Ngishintshile ingqondo yami